Manamafy ny ezaka ataony i Satana
Vers des restrictions allégées en Grande-Bretagne pour faire revenir les touristes
"Ny Anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra Azy ka mamonjy azy."- Sal. 34:7.
Tena tokony hampivadi-po antsika tokoa ny hery sy ny hafetsen'i Satana sy ny an'ny tafika momba azy raha tsy azontsika atao ny mahita fialofana eo amin'ny hery lehibe kokoa an'ilay Mpanavotra antsika. Hamafisintsika fatratra ny tranontsika amin'ny alalan'ny karetsaka sy ny hidim-baravarana mba hiarovantsika ny fananantsika sy ny aintsika amin'ny olon-dratsy; nefa mahalana no hiheverantsika ireo anjely ratsy izay tsy mijanona ny mitady lalana ho eo amintsika, ary tsy manana fomba hoenti-miaro ny tenantsika amin'ny fanafihana ataony isika, raha ny herintsika samirery. Raha avela hanao izany izy, dia ho vitany ny hahatonga antsika ho very saina, ny hampikorontana sy hampijalijaly ny tenantsika, ny handrava ny fananantsika sy handringana ny aintsika. Ny hany fahafinaretana ho azy ireny dia ny mampahory sy mandrava.
Mahatsiravina ny manjo izay mandà tsy hankatò an' Andriamanitra fa mitolo-batana amin'ny fakam-panahin'i Satana, satria amin'ny farany dia hafoin'Andriamanitra hianjadian'ny fanahy ratsy izy. Fa ireo izay manaraka an'i Kristy kosa dia voaaro mandrakariva noho ny fiambenany sy ny fikarakarany. Misy anjely mahery indrindra hirahina avy any an-danitra hiaro azy. Tsy vakin'ilay ratsy ny fiarovana izay nahodidin'Andriamanitra ny vahoakany.
Madiva hifarana ny ady lehibe nifanaovan'i Kristy sy i Satana, izay tsy nanam-piatoana efa ho enina arivo taona izao; ary mampitombo fatratra ny ezaka ataony ilay ratsy mba handravana ny asa ataon'i Kristy ho an'ny olona sy hamatorana ny fanahy amin'ny fandrika velariny. Ny zavatra kendreny dia ny hitana ny vahoaka ao amin'ny haizina sy ny tsy fetezana hibebaka mandra-pahatapitry ny fanalalanana ataon'ny Mpamonjy, ka tsy hisian'ny fanatitra noho ny ota intsony.
Rehefa tsy misy ezaka manokana atao hoenti-manohitra ny heriny, rehefa manjaka eo amin'ny fiangonana sy eo amin'izao tontolo izao ny tsy firaihana, dia afaka ahiahy i Satana; satria amin'izay mantsy dia tsy mananontanona azy ny loza hahavotsotra avy eo am-pelatanany ireo izay giazany ho babon'ny sitrapony. Nefa kosa rehefa mifantoka amin'ny zavatra maharitra mandrakizay ny saina ka manontany ny fanahy hoe: "Inona no hataoko mba ho vonjena aho?" amin'izay dia mailo izy, mitady izay handaminany ny heriny hoenti-manohitra ny herin'i Kristy(...). Izany koa no antony anatrehany ny fivoriana rehefa miangona hidera an' Andriamanitra ny olona. Na dia takona tsy hita maso aza izy, dia milofo fatratra mba hifehy ny sain'ny mpivavaka."- HM, tt. 537-540